Amazwi Kankulunkulu Ansukuzonke | UKristu Wezinsuku Zokugcina Kuphela Onganika Umuntu Indlela Yokuphila Ingunaphakade (Okucashuniwe 1) | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Izimfundiso Kwezwi likaNkulunkulu 60
UNkulunkulu uSomandla uthi, "Ngaphambi kokuba khona kwesintu, indawo yonke—wonke amaplanethi, zonke izinkanyezi ezisemazulwini—kwase kukhona. Ngezinga elibanzi, lezi zindikimba ezisemkhathini zase zizungeza njalo, ngaphansi kokulawula kukaNkulunkulu, ngoba konke ukuba khona kwazo, yonke iminyaka lokho okwaba yiyo. Ukuthi yimuphi umhlaba oya kuphi futhi ngasiphi isikhathi; yimuphi ophenduka kumuphi umgudu wokuzungeza, futhi unyamalala nini noma kungena nini okuthile esikhundleni sawo—zonke lezi zinto zaziqhubeka ngaphandle kokuphazamiseka ngisho kancane. Izindawo okume kuzo imihlaba namabanga aphakathi kwawo konke kulandela inqubo eqondile, konke kungachazwa njengomniningwane onembile; imizila okuhamba ngayo, ijubane nezindlela okuzungeza ngakho, izikhathi ezisezindaweni ezihlukahlukene ngazo zingabaleka ngokunembile futhi zichazwe ngemithetho ekhethekile. Izigidigidi zeminyaka imihlaba ibilokhu ilandela le mithetho, ingalokothi iphambuke nakancane. Awekho amandla angaguqula noma aphazamise ukuzungeza kwayo noma indlela eyilandelayo. Ngenxa yokuthi imithetho ekhethekile eqondisa ukuhamba kwawo nemininingwane enembile ewachazayo kunqunye kusengaphambili igunya loMdali, alalela le mithetho ngokwawo, ngaphansi kobukhosi nokulawulwa uMdali. Ngomqondo obanzi, akukho nzima ngomuntu ukuthola izindlela ezithile, iminingwane ethile, kanye nemithetho engavamile futhi engachazeki. Nakuba isintu singakwemukeli ukuthi uNkulunkulu ukhona, singalamukeli iqiniso lokuthi uMdali wenza futhi ubusa yonke into, futhi ngaphezu kwalokho singakuqapheli ukuba khona kwegunya likaMdali, ososayensi, izazi zezinkanyezi, nodokotela bemvelo balokhu bethola ukuthi ukuba khona kwazo zonke izinto ezisendaweni yonke, nezimiso nezindlela zokulawula ukuhamba kwazo, konke kuqondiswa futhi kulawulwa amandla amakhulu amnyama angabonakali. Leli qiniso liphoqa umuntu ukuba abhekane futhi avume ukuthi kunoSomandla kulezi zindlela, oqondisa yonke into. Amandla Akhe awavamile, futhi nakuba kungenamuntu ongabona ubuso Bakhe bangempela, uqondisa futhi alawule yonke into. Akekho umuntu noma amandla angedlula ubukhosi Bakhe. Ebhekene naleli qiniso, umuntu kumele aqaphele ukuthi imithetho eqondisa ukuba khona kwazo zonke izinto ngeke ilawulwe abantu, ngeke iguqulwe muntu; futhi ngesikhathi esifanayo umuntu kumele avume ukuthi abantu ngeke bayiqonde ngokugcwele le mithetho. Futhi ayizenzakaleli ngokwemvelo, kodwa iqondiswa uNkulunkulu iNkosi. Konke lokhu kuwukubonakaliswa kwegunya likaNkulunkulu umuntu angalifuna ngezinga elibanzi. Ngokwezinga eliphansi, zonke izintaba, imifula, amachibi, ulwandle, namazwekazi anabantu emhlabeni, zonke izinkathi zonyaka adlula kuzo, zonke izinto ezihlala emhlabeni, okubandakanya izihlahla, izilwane, izilwanyana ezincane, nabantu, kungumsebenzi wobukhosi bukaNkulunkulu, futhi kulawulwa uNkulunkulu. Ngaphansi kobukhosi nokulawula kukaNkulunkulu, konke kuba khona noma kunyamalale ngokuvumelana nemicabango Yakhe, ukuphila kwakho kuqondiswa imithetho ethile, kuyakhula futhi kwande. Akekho umuntu noma into engaphezu kwale mithetho. Kungani kunjalo? Okuwukuphela kwempendulo ukuthi, kungenxa yegunya likaNkulunkulu. Noma, ukukubeka ngenye indlela, kungenxa yemicabango kaNkulunkulu namazwi kaNkulunkulu; uNkulunkulu uqobo Lwakhe ukwenza konke. Lokho kusho ukuthi, yigunya likaNkulunkulu nomqondo kaNkulunkulu okumisa le mithetho; iyogudluka futhi iguquke ngokuvumelana nemicabango Yakhe, futhi konke lokhu kugudluka nokuguquka kwenzeka noma kunyamalale ngenxa yecebo Lakhe. Cabanga ngezifo eziwubhubhane ngokwesibonelo. Ziqubuka ngaphandle kwesexwayiso, akekho owazi imisuka yazo noma izizathu zangempela zokwenzeka kwazo, futhi noma isiphi isifo esiwubhubhane esifinyelela endaweni ethile, labo abaneshwa bayehluleka ukuphunyuka enhlekeleleni. Ososayensi bacabanga ukuthi izifo eziwubhubhane zibangelwa ukusabalala kwezilwanyana ezincane eziyingozi nezilimazayo, futhi ijubane nendlela eziyisebenzisayo ukuze zithelele isifo kwabanye ayinakuqagelwa noma ilawulwe yinoma imuphi usosayensi ongumuntu. Nakuba isintu senza konke esingakwenza ukumelana nazo, abakwazi ukulawula ukuthi yibaphi abantu noma izilwane ezithelelekayo lapho kuqubuka lezi zifo eziwubhubhane. Okuwukuphela kwento umuntu angayenza ukuzama ukuzigwema, ngokucwaninga ngazo. Kodwa akekho owazi umnyombo wangempela ochaza ukusuka nokuhlala kwanoma isiphi isifo esiwubhubhane, futhi akekho ongasilawula. Bebhekene nokuqubuka nokusabalala kwesifo esiwubhubhane, into yokuqala abantu abayicabangayo ukusungula umuthi wokusigomela, kodwa ngokuvamile isifo esiwubhubhane size siziphelele sona ungakalungi nomuthi wokusigomela. Yini eyenza izifo eziwubhubhane ziphele? Abanye bathi amagciwane asuke eselawuleka, kanti abanye bathi siphela ngenxa yokuguquka kwezinkathi zonyaka…. Ukuthi lokhu kuqagela kuyiqiniso yini, ososayensi abaphawuli lutho ngalokho, ayikho impendulo eqondile abayinikezayo. Lokho isintu esibhekene nakho akukona nje ukuqagela, kodwa ukuntula kwesintu ukuqonda nokwesaba izifo eziwubhubhane. Ekugcineni, akekho owaziyo, ukuthi izifo ziqalwa futhi ziqedwe yini. Ngenxa yokuthi isintu sinokholo kuphela kusayensi, sincika ngokuphelele kuyo, kodwa asiliqapheli igunya loMdali noma samukele ubukhosi Bakhe, asisoze sayithola impendulo."